Xasil la’aanta Xaabsade iyo Xagalotoosiye ee Somaliland | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Xasil la’aanta Xaabsade iyo Xagalotoosiye ee Somaliland
Xasil la’aanta Xaabsade iyo Xagalotoosiye ee Somaliland
Wararka laga helayo magaaladda Hargeysa ayaa sheegaya in masuuliyiinta Somaliland ay wallaac aad u xooggan ka qabaan goosashadda siyaasiyiinta gobolladda bari ee maamulkaasi.
Horraantii isbuucaan, Axmed Cabdi Xaabsade oo horey xillal kala duwan uga soo qabtay Somaliland imminkana ahaa la taliyaha dhinaca doorashooyinka ee madaxweyne Siilaanyo ayaa gaaray Garoowe wuxuuna soo dhaweyn ka dib kaga dhawaaqay inuu si rasmi ah ugu soo biiray maamulka Puntland ee Soomaaliya.
Sidoo kale warar si hoose ugu soo dusay warbaahinta maxaliga ah ayaa tilmaamaya in wasiirka caafimaadka ee Somaliland, Suleymaan Axmed Ciise oo ku magac dheer “Xagalotoosiye” si weyn loo hadal hayo inuu isagga tago Somaliland.
Wasiirka oo sida la sheegayo ku sugan magaaladda Jigjiga ayaa ku wajahan caasimadda Puntland ee Garoowe, hase ahaatee, xasil la’aanta Xaabsade iyo Xagalotoosiye ayaa immaanaysa xilli weli lagu muransan yahay mustaqbalka gobolladda ay kasoo jeeddaan ee Sool iyo Sanaag.
Previous articleDawladda Soomaaliya oo hub ka dhigis ka wada Muqdisho
Next articleGeyllanka golaha ammaanka oo gaaraya geyigga Soomaaliya